रामनवमीमा एक घन्टा मात्रै खुल्याे राम मन्दिर [तस्बिरहरू]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २०, २०७६ तस्बिर : दीपक केसी
काठमाडौँ — काठमाडाैंस्थित बत्तिसपुतलीमा रहेकाे राम मन्दिर बिहीबार रामनवमीकाे अवसरमा एक घन्टाका लागि मात्रै खुलाइएकाे छ । काेराेना भाइरस(काेभिड–१९) काेे जाेखिम राेकथामका लागि देशभर लकडाउन गरिएका कारण बन्द मन्दिर बिहान ९ देखि १० बजे नित्य पूजाका लागि मात्र खुलाइएकाे हाे । पूजा समयमा यहाँका केही स्थानियवासीले मन्दिर दर्शन गरेका थिए ।
हेर्नुहाेस् तस्बिरहरू :
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ११:१६
चैत्र २०, २०७६ सुवास बिडारी
मकवानपुर — हेटौंडामा कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) संक्रमण परीक्षणका लागि ल्याब तमतयार राखिएको छ । हेटौंडा–१० स्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा बिहीबारबाट कोरोना परीक्षण गर्न लागिएको हो ।
वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म अस्पताल, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनबाट नमुना स्वाब आइसकेका छैनन् । ‘हामीले आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौं, स्वाबहरू प्राप्त भएपछि क्रमशः नतिजा आउन थाल्नेछ’, उनले भने ।
संघीय सरकारले किट, औषधि र पीपीई उपलब्ध गराएको तीन दिनपछि परीक्षण सुरु भएको हो । ‘हामीसँग भाइरस, ब्याक्टेरिया, प्यारासाइटको प्रजाति अध्ययन गर्ने र भाइरसको स्वरूप परिवर्तनबारे बुझ्ने पीसीआर मेसिन पाँच वर्षअघि नै थियो । तर, परीक्षण किट र आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या भइरहेको थियो,’ सुवेदीले भने ।
उक्त ल्याब सञ्चालन गर्न संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली हेटौंडा आएर अध्ययन गरेको थियो । ल्याबमा एकपटकमा ६० वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ । परीक्षण थालिएको साढे दुई घण्टाजतिमा नतिजा प्राप्त हुन्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सतीश विष्टका अनुसार एकपटक परीक्षण गर्दा करिब १३ हजार रुपैयाँ लागत पर्छ । मन्त्रालयसँग करिब पाँच सय नमुना परीक्षण गर्न पुग्ने केमिकल छ ।
यसअघि विज्ञको अभावमा उक्त ल्याब प्रयोगमा आउन सकेको थिएन । २०७१ सालमा दाताको सहयोगमा स्थापित ल्याबमा अहिले टेक्निसियन निरीक्षक र असिस्टेन्ट गरी दुई जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी छन् । ‘यो ल्याब नियमित सञ्चालन गर्ने हो भने हेटौंडामा भाइरस, ब्याक्टेरिया र प्यारासाइटको अध्ययन गरी उपचार सहज बनाउन सकिनेछ’, सामाजिक मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. पुरुषोत्तम सेढाईंले भने ।
२०३५ सालमा स्थापित उक्त केन्द्रमा २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा प्राविधिकसहित १६ जना कार्यरत छन् । कार्यालयप्रमुख डा. यदुचन्द्र घिमिरे दुई साताअघि सरुवा भएपछि केन्द्र प्रमुखविहीन बनेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ११:१३